डोनाल्ड ट्रम्पले दिए नेपालमा राजसंस्था फर्काउने संकेत, अब के गर्लान् देउवा, ओली र प्रचण्ड ? « Surya Khabar
डोनाल्ड ट्रम्पले दिए नेपालमा राजसंस्था फर्काउने संकेत, अब के गर्लान् देउवा, ओली र प्रचण्ड ?
काठमाण्डौ । गणतन्त्र स्थापना भएको एक दशकपछि फेरि राजसंस्था फर्काउने विषयमा नेपालीहरु बीच नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपालका अतिरिक्त प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुले समेत यो विषयलाई निकै चासोका साथ उठाउन थालेका हुन् । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्थाका विषयमा कुरा उठाउनु कुनै नौलो कुरा होइन तर पछिल्लो समयमा बौद्धिक तह र तप्काबाटै राजसंस्थाको आवश्यकताका नयाँ बहस सुरु हुन थालेको छ । राजसंस्था फर्केला नफर्केला त्यो छुट्टै बहसको विषय हो तर नेपालको बौद्धिक जमातलेनै चासो व्यक्त गर्नुचाहि निकै अर्थपूर्ण कुरा हो ।